लकडाउनले बालबालिकामा मनोत्रासको समस्या - नेपालबहस
लकडाउनले बालबालिकामा मनोत्रासको समस्या
| १५:५५:५७ मा प्रकाशित
◊ सञ्चिता घिमिरे
२३ बैशाख, काठमाडौं । विश्वव्यापीरुपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ का कारण कतिपय बालबालिकामा निद्रा नलाग्ने, झर्को लाग्ने र एउटै कुरा मनमा खेलाउने जस्ता समस्या देखिन थालेको छ । कोभिड–१९ को रोकथामका लागि सरकारले जारी राखेको ‘लकडाउन’ का समयमा बालबालिकामा मनोत्रासको समस्या बढी मात्रामा देखिएको हो । अस्पतालले अहिले पनि बालबालिकामा आउनसक्ने मनोसामाजिक समस्याको उपचारका लागि सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ ।
त्यस्तै, अस्पताल तत्काल आउन नसक्नेका लागि ९८०८५२२४१० नम्बरमा सम्पर्क गर्न भनिएको छ । टेलिफोनमा र अस्पतालमा आएका बालबालिकामा विभिन्न किसिमका समस्या देखिन थालेको मनोचिकित्सक डा आलोक झाले बताए । उनले भने, “कतिपय बालबालिकामा कुनै समस्या नभए पनि अभिभावक बढी चिन्तित भएको पनि पाइएको छ ।”
रोगबाट बच्नका लागि आवश्यक सावधानी अपनाउनुपर्ने भए पनि कतिपय अभिभावकले सन्तानलाई धेरै डर देखाउँदा समस्या आएको अस्पतालले जनाएको छ । रोगकै त्रासका कारण बालबालिकामा निद्रा नलाग्ने र अरु कुनै पनि कुरामा मन नलाग्ने समस्या पाइएको उनले बताए। कतिपय बालबालिकामा शरीर झमझमाउनेलगायत शारीरिक समस्या भने पनि उपचारका क्रममा त्यो मानसिक समस्या भन्ने देखिएको छ । बालबालिकामा यो समयमा मुख्य गरी इञ्जाइटिक ९मनोत्रास०, कन्भर्जन डिस्अर्डर र एडजेस्टमेन्ट डिसअर्डरका समस्या पाइएको छ । उनले भने, “जसरी पहिले नसोचेको कुरा एकै पटक आउँदा बयस्कमा तनाब छ त्यो कुरा बालबालिकामा पनि हुन्छ ।”
अहिले देशभरमा सङ्क्रमित ८२ मध्ये कतिपय बालबालिका समेत छन् । ती बालबालिका निको भएर फर्केपछि पनि बारम्बार आफूलाई अझै सङ्क्रमण छ कि भन्ने सोच्ने समस्या आउन सक्ने मनोचिकित्सक डा झाले बताए । समाजले अहिले पनि कोभिड–१९ को उपचारपछि घर फर्किएकालाई हेलाका दृष्टिले हेर्ने कुरा सञ्चारमाध्यममा आइरहेको छ । उनले भने, “त्यसले पनि बालबालिकामा तनाब गराउन सक्छ ।”
अस्पतालले फोनबाटै बिरामीको समस्या सुनेर आवश्यक सल्लाह दिने गरेको छ । लकडाउनको समयमा अस्पताल जान सहज नभएकाले ती अभिभावकसँग मेसेन्जर र भाइवरबाट पनि आवश्यक परामर्श दिइएको डा झाले बताए । मनोसामाजिक शाखामा कार्यरत चिकित्सकले ती बालबालिकाको घर नजिकै हुँदा वा भेटेरै उपचार गर्नुपर्दा बोलाउने गरेका छन् । उनले भने, “तत्काल आउन नपर्ने र टाढा घर भएकालाई भने फोनबाटै आवश्यक सुझाव दिइन्छ ।”
कतिपय अभिभावक साना बालबालिकालाई समेत कोभिड–१९ का बारेमा बुझाउन चाहेको पाइएको डा झाले बताए । रोगका बारेमा बुझ्ने उमेर नभएका बालबालिकालाई त्यसका बारेमा बुझाउन आवश्यक नभएको उनको भनाइ छ । ती बालबालिकालाई सफाइमा ध्यान दिने, घर बाहिर खेल्न नजाने र भीडभाडमा जान हुँदैन भन्ने कुरा अरु तरिकाले पनि बुझाउन सकिन्छ । खासगरी ६ वर्ष नाघेका बालबालिकाले रोगका विषयमा बुझ्ने हुँदा उनीहरुलाई आवश्यक कुरा मात्रै बुझाउनुपर्ने उनले बताए । यो समयमा अभिभावकले सन्तानलाई समय तालिकामा नै सबै क्रियाकलाप गराउँदा उपयुक्त हुन्छ । अभिभावकसँग पनि समय भएकाले बिहान उठेदेखि राति सुत्दासम्म के के गर्ने भनी तालिका बनाएर गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
“बालबालिकालाई मोबाइल वा टिभीमै बढी समय बिताउन दिनुहुँदैन”, उनले भने, “चित्र बनाउने, कथा भन्न, पढाउन लगाउने र अरु सिर्जनात्मक काममा लगाउन सकिन्छ ।” अस्पतालको कल सेन्टरमा अहिलेसम्म ६८ जनाले टेलिफोन गरेर परामर्श लिइसकेका छन् । तीमध्ये कतिपय भने अस्पताल पनि आइरहेका छन् । अस्पतालमै मानसिक समस्याको उपचारका लागि आउने बालबालिकाको सङ्ख्या झण्डै ८० को हाराहारीमा छ ।
कोभिड–१९ को स्याटलाइट अस्पतालका रुपमा कान्ति बाल अस्पताल रहेको छ । अस्पतालले खोप कार्यक्रम, बहिरङ्ग विभागलगायत अत्यावश्यक सेवालाई लकडाउनको समयमा पनि निरन्तरता दिएको छ । अस्पतालले कोभिड–१९ रोकथामका लागि कर्मचारीको हाजिर थम्ब नगरेर अनुहार पढ्ने ९फेस रिड० शुरु गरिएको अस्पताल निर्देशक कृष्ण पौडेलले बताए । छिट्टै इटिकेटिङ शुरु गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए।
मानसिक समस्याबाहेकका अरु शारीरिक रोगको अहिले तत्काल उपचार नगरी नहुने वा ठूलो समस्या आउँदाबाहेक ‘फलो अप’ का लागि अहिले अस्पताल नआउन बिरामी बालबालिकाको अभिभावकलाई आग्रह गरेको छ । लकडाउनमा जिल्ला जिल्लाबाट वा काठमाडौँमा पनि आउन सहज नभएकाले अत्यावश्यकबाहेक अस्पताल नआउन भनिएको हो ।
जुनसुकै बालबालिकामा स्वास्थ्य समस्या देखिँदा ड्युटीमा रहेका चिकित्सकलाई सोध्न सकिने गरी नम्बर तय भएका छन् । यो समयमा बालबालिकामा कुनै पनि समस्या देखिएकामा ०१४४२७४४९ वा ९८४७३८६२०५ मा फोन गरेर मेडिकल डाक्टरसँग बुझ्न सकिनेछन् । त्यस्तै, शल्यक्रियासम्बन्धी समस्याका बारेमा अस्पतालमा ०१४४४३१३१ वा ९८४७३८६१५० नम्बरमा फोन गरेर बुुझ्न सकिनेछ । अस्पतालले कोभिड–१९ को शङ्का लागेका बिरामीलाई ‘आइसोलेसन’ श्ययामा राखेर ¥यापिड टेष्ट गर्ने र पीसीआर परीक्षणका लागि राष्ट्रिय प्रयोगशाला पठाउने गरेको छ ।
मेक्सिकोमा आप्रवासी बालबालिकाको संख्या ३ हजार भन्दा धेरै २ दिन पहिले
आज पनि बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ खुवाइँदै ४ दिन पहिले
आज बालबालिकालाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाइँदै ५ दिन पहिले
चीनका ९७ प्रतिशत अभिभावक भन्छन् :- बच्चालाई अति हेरचाह सामान्य हो ? ४ हप्ता पहिले
बुवाले अर्की आमा ल्याएपछि पाँच बालबालिकाको बिचल्ली ४ हप्ता पहिले
रिलायन्स फाइनान्सको मुनाफा ३७.३१ प्रतिशतले बढ्यो, वितरणयोग्य मुनाफा कति ? १६ घण्टा पहिले
बागलुङका अधिकांश स्थानीय सरकार दमकलविहीन ७ घण्टा पहिले
एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक शुरू ११ घण्टा पहिले
बालबालिकाको स्वास्थ्याधिकारप्रति संवेदनशील बन्न आयोगको आग्रह ५ दिन पहिले
समीट लघुवित्तले माग्यो कर्मचारी ४ दिन पहिले
दुधौलीका तीन वडा एक हप्ताका लागि बन्द १३ घण्टा पहिले
नेपाल सुपरलिगको मेडिकल पार्टनरमा नर्भिक अस्पताल अनुबन्धित २ दिन पहिले
६० हजार ५ सय ८७ जनाले पाए कोरोना बीमाबापतको भुक्तानी ४ दिन पहिले
४२ करोडको लागतमा पाँच पुल निर्माण हुँदै १ दिन पहिले
इन्डोनेसियामा बेपत्ता ५३ सैनिकसहित नौसैनिक पनडुब्बीको खोजी तिब्र १ दिन पहिले
सर्वसाधारणको लागि लघुवित्त कम्पनीले २३ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्दै २ हप्ता पहिले
बुटवलमा अर्घाखाँचीकी संक्रमित महिलाको मृत्यु ७ दिन पहिले
फरि अर्को हाईड्रोपावर कम्पनीले २४ लाख कित्ता आईपीओ ल्याउँदै ४ हप्ता पहिले
वैशाखमा हिमपात हुँदा हुम्लाका किसान अचम्भित २ दिन पहिले
किन आउँदैन रातमा निद्रा, यस्तो किन हुन्छ ? ३ हप्ता पहिले
चेम्बर पदाधिकारी र पाकिस्तानी राजदूतबीच भेटवार्ता ४ हप्ता पहिले
आज उपत्यकासहित १९ जिल्लाका नदी खोलामा बाढी आउने सम्भावना ९ महिना पहिले
आगामी पुसमा प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट हुने ५ महिना पहिले
हेटौँडामा काेरोना संक्रमणवाट ५२ वर्षीया महिलाको मृत्यु ८ महिना पहिले
भाजपा नेता तथा महाराष्ट्रका पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई संक्रमण पुष्टि ६ महिना पहिले